MORELS IYO KHADADKA: SIDA LOO KALA SAARO BOQOSHAADA (SHARAXAAD IYO SAWIR) - MUSHROOMS
Waa maxay farqiga u dhexeeya boqoshaada cagaha iyo cagaha?
Mushahar aad u badan oo la cuni karo waxay la mid yihiin kuwa sunta ah, waana ay adkaan kartaa in la kala saaro xitaa iyada oo xittaa picker soo saaro. Tusaale ahaan, cirbadaha waxay leeyihiin tiro isku mid ah oo la mid ah khadadka, waxayna badanaa isku jahwareeraan, ururinta hal sadar. Waxaan ka hadli doonaa kala duwanaanshaha caqiidooyinka iyo khadadka qodobkan.
Morel caadi ahaan: sharaxaad
Morel (Latin Morchella esculenta) waa miisaan laga soo qaatay fasalka marsups iyo qoyska isla magaca. Waa mid ka mid ah boqoshaada ugu weyn ee qoyska. Dhererka wuxuu gaari karaa 6-20 cm Miisaanka - ilaa 500 g.
Waxay leedahay fare diidmo leh, sida caadiga ah ukumaha, sida caadiga ah, xoqan (laga bilaabo fossa-cells), taas oo ah 3 illaa 7 cm dhexroor, 3-8 dhexroor. Waxaa lagu rinjiyeyn karaa midabyo kala duwan: jaalle, cawl, bunni, iwm. Xubnaha waayeelka ah waxay leeyihiin koofiyado madow. Lugaha waxay leeyihiin qaab cylindrical ah. Waxaa si taxadar leh ugu xiran daboolka. Dhererkoodu waa 3-9 cm, dhumucuna waa 1.5-3cm. Midabka lugta ah ee boqoshaada dhalaaluhu waa caddaan, kuwa ugu waawayn waa huruud, kareem. Muuqaal ahaan waxay u muuqataa in koofiyada hareeraha iyo lugta ay leeyihiin dherer isku mid ah.
Ma taqaanaa? Sanadkii 1974-dii, hanjabaad heer qaran ah ayaa lagu dhawaaqay mushaarka rasmiga ah ee gobolka Minnesota (USA).
Qayb ka mid ah iftiinka likaha. Jidhkoodu waa jilicsan yahay, jilicsan yahay, si fudud ayuu u jajabiyaa marka la taabto.
Waxaad la kulmi kartaa aagaga cimilada ee waqooyiga dhexe. Caadi ahaan waxay koraan keligii, marar dhif ah ayay ku koraan kooxo. Wuxuu dooranayaa dhibco dhalaalaya iyo carro bacrin ah. Waxay ku kori kartaa kaymaha iyo meelaha cawska ah, meelaha bacaadka ah, beeraha khudradda.
Waxay kortaa bartamaha Abriil ilaa dhammaadka Maarso.
Boqoshaada ugu caansan iyo amaankuna waa champignons. Baro naftaada hababka beerista champignon iyo tiknoolajiyada beerista guriga.
Inta ugu badan noocyada caamka ah:
la cuni karo (caadi) - Morchella esculenta;
dheer - Morchella elata;
Mashruucan waa midka ugu badan ee la mid ah khadadka.
Baro waxyaabo faa'iido leh oo ah agaric malab, iyo sidoo kale sida loo kala saaro inta u dhexeysa sheyga la cuni karo iyo kuwa aan la dabooli karin.
Haddii aad xiiseyneyso su'aasha, boqoshaada morel - la cuni karo ama aan ahayn, markaa waa la cuni karaaWaxay leedahay dhadhan wanaagsan oo ku dhawaad ​​ur aan ur lahayn. Daweynaa boqoshaada xaalad ahaan la cuni karo ee soo galaya qaybta saddexaad. Waxay ka kooban yihiin hydrozin, walxo sun ah, oo xooga yar.
Waxaa la cuni karaa kaddib marka la kariyo ugu yaraan 10-15 daqiiqo ama la qalajiyo.
Sidoo kale akhri ku saabsan noocyada la cuni karo iyo sunta ee qoyska syrrozhkah ee boqoshaada.
Sidee loola jahwareerin aamuska leh khadadka
Labadan mushaharkood waxay isku midka yihiin midba midka kale, waana ay fudud yihiin inay isku wareeraan. Dhanka kale, cunida khadadka cayriin waxay noqon kartaa mid dhimasho ah, maadaama ay yihiin kuwo dhimasho ah. boqoshaada sunta ahoo ay ku jirto sunta xooggan - gyromitrin. Tiradu waxay ku xirnaan doontaa meesha koritaanka khadka iyo da'diisa.
Ma jiro fikrad aan ku qanacsaneyn oo ku saabsan haddii laysku kobciyo likaha la cuni karo iyo marka aan la isticmaalin ka dib karinta. Waxaa jira talo soo jeedin ah inaysan daaweyntu ka caawin karin ka saarista sunta jirka. Waxaa sidoo kale la aaminsan yahay in la cuni karo ka dib karinta.
Waa muhiim! Cunto la shiilay, laakiin aan la karinin, ama maraq, taas oo ay la kariyey, waxay keeni karaan sumeyn daran oo saameynaya habka dhexe ee neerfaha, beerka, mareenka caloosha, iyo sidoo kale natiijada dhimashada. Khadadka la kariyey waa in loo isticmaalaa taxadar. Maaddooyinka ay ku jiraan, ka dib marka daaweynta kulaylku noqon karto kansar.
Jidhka miro-geedka fangasku wuxuu aad ugu eg yahay qaabka maskaxda ama walnut. Koofiyadu waxay leedahay qaabka wareegga aan joogtada ahayn, dhexdhexaad ah 2-10 cm, dhammaantood waa la jaan qaadaa oo la isku xidhan yahay oo ku xiran cidhifyada lugta.
Eeg sida ciridka iyo tolida dabiiciga ah, waxaad ku arki kartaa sawirka.
Waxaan kugula talinaynaa inaad barato noocyada boqoshaada boqoshaada la cuni karo: volnushkami, doofaarrada iyo noocyada ay ka mid yihiin, chanterelles, mokhovikov, podgruzdkami.
Aynu isku dayno inaanu garanno waxa farqiga u dhexeeya aaladaha iyo khadadka:
Haddii aad si fiican u fiirsato, waxaad arki kartaa in madaxa ugu horreeya uu yahay mid caadi ah, iyo kan labaadna wuxuu u eg yahay maskaxda aadanaha.
Morels waxay u muuqdaan inay si fiican uga soo baxaan dhulka. Lugta ayaa si buuxda u furan. Lugta hoosteeda waxay ku socotaa dhulka ama dhulka dabiiciga ah. Waxay ku dhowdahay inaan la arki karin.
Markaad eegto labadan miisaan, mid ayaa hela aragtida ah in fekerka ugu horreeya (morel) uu u muuqdo inuu kor u kacayo (labadaba lugta iyo lugtu waa mid aad u dheer), iyo kan labaad - liddi ku ah, dhulka: waa calaamad, lugtu waa ballaaran oo hoos u dhigaysa.
Morel ee dhexda dhexe waa meel bannaan, khadka ayaa ka buuxsana saxarka dabaysha.
Sida caadiga ah khadadka way ka weyn yihiin aafooyinka.
Morels waxay leeyihiin ur aan yareyn oo ka badan inta laysku halleyn karo.
Waxay faa'iido u yeelan doontaa bilowga mushaharka si loo barto waxa mycelium iyo mycorrhiza ay yihiin.
Goorta la ururiyo astaamaha
Marka laga eego halka ay asalkiisu koraan iyo marka la ururinayo, habka ururinta waxaa laga bilaabi karaa dhammaadka Abriil. Inkastoo waqtigaan ay weli yihiin wax aan dhadhan lahayn, oo aysan haysan dhadhan mushahar ah. Kaliya Maajo, waxay noqdaan kuwo xoog leh, oo udambeeya oo aad u macaan.
Xagee loo ururiyaa
Waxaad la kulmi kartaa boqoshaada kuwan:
ee kaymaha (cufan, isku dhafan), geesaha kaynta iyo waddooyinka, goobaha si fiican u iftiimaya, nadiifinta;
xagga beeraha dhexdooda,
Baro wax badan oo ku saabsan noocyada, hantida faa'iido leh iyo goynta boqoshaada cad.
Waxay ku kori kartaa bacrin iyo bac, carrada ciidda ciidda leh. Raadinta iyaga ma aha mid aad u fudud, maadaama ay marar badan ku xiran tahay midabka qalalan, cawska.
Waxaan kugula talineynaa inaad ka akhrido noocyada dhulalka qoyan (aspen, madow), sifooyinka faa'iido leh iyo waxyeelada leh ee boqoshaadan, iyo sidoo kale hababka goosashada xilliga qaboobaha.
Sida miyir-beelka, iyo xariiqyada waa in loo isticmaalaa taxadar iyo kaddib marka la karinayo. Marka laga shakisan yahay in nooc ka mid ah liko ee aan ku jirin dambiishaada soo iibsashada musqusha, si aad u tuurto oo aan khatar gelin caafimaadka.
Waa muhiim! Haddii aad jeclaan lahayd inaad qaadato musqusha, markaa waa inaad marwalba firfircoonaato dhuxul, cusbo ama shaaribo gacmeed si aad uga caawiso calaamadaha ugu horreeya ee sumowga, iyo sidoo kale taleefanka taleefanka gargaarka degdega ah.
Khadadka karkarinta waa in lagu sameeyaa daaqada furan, maaddaama inta lagu jiro karinta suntu waxay uumi baxaysaa. Sababtaas oo kale, ha ka nexin laba mar oo maraq karkaraya. Karinta waa inay ku dhacdaa weel qarsoon.
Caadi ahaan, calaamadaha ugu horreeya ee sumowga, waxaa jira dhowr ah khasab: matag, shuban, iyo xanuunka caloosha.
Waxay ku dhici karaan waqtiyo kala duwan iyadoo ku xiran fungus la cuno. Xumadaha sunta waxay muuqdaan 6-10 saacadood ka dib marka la isticmaalo.
Ka taxadar oo ha ururin boqoshaada aan laguu ogayn! Isticmaalka boqoshaada sunta leh (boqoshaada shinni ah, cagaarka cagaaran) aad bay halis u tahay caafimaadka iyo nolosha!
Haddii ay dhacdo in suntan sahlan iyo calaamadaha muujinaya calaamadaha kor ku xusan, mid waa inuu matagaa matagid, oo cabbaa qadar badan oo biyo ah oo leh shaaha oo milix ah ama qalalan qallalan, dhaqi caloosha. Waxaa suurtogal ah in aad matagto mato adoo cabaya biyo badan iyo laba farood oo riixaya xididka carrabka. Ka dib markaad maydho waa inaad kiniiniga qaadataa Kaararka firfircoon (hal ama laba xabbadood kiilo culeyska aadanaha).
Haddii suntan daran uu dhaco miyir beelid, wac degdeg ah ayaa loo baahan yahay.
Mushrooms waa in aan la siinin carruurta, oo ay cunaan hooyooyin uur leh, hooyooyin nuujinaya, dadka qaba xanuunka shaqsi la'aanta, kuwa haysta dhibaatada shaqada nidaamka wadnaha iyo xididdada.
Ma taqaanaa? Morelska dalal badan ayaa aad loogu mahadcelinayaa sababtoo ah dhadhankiisa. Waxaa jira awoodo lagu wargaliyo boqorka boqoshaada. In America, waxaa jira xitaa bulsho ah morels, iyo waxaa jira qaali ah.
Sida loo kariyo aafooyinka
Ugu dambeyntiina, erayo yar oo ku saabsan sida loo diyaariyo morelka iyo laalaabka labajibbada.
Rushka ugu horeeya ee karkaraya biyo cusbayn iyo karkari ugu yaraan 15-20 daqiiqo. Taas ka dib, maraq waxaa lagu shubay, oo boqoshaada waxaa lagu dhaqaa biyo socda. Kadibna waxaa lagu kariyaa karayaan - shiil, dubi, qajaar, qallajiye, iwm. Nidaamka karkarinta waa qasab in kiisaska oo dhan marka laga reebo qalajinta dheeraad ah. Waad qallajin kartaa adiga oo aan karkarin. Waxaa jira cuntooyin badan oo ka mid ah astaamaha. Tani waxaa ka mid ah in lagu daro baasto, boorashka, roodhida, saladhyada, iyo qoyaanka foornada, oo isticmaalaya sida buuxsamaysa sausages, keega, pies. Meesha kaliya ee aan lagu talin in ay isticmaalaan boqoshaada waa koorsooyinka koowaad. Halkaas waxay luminayaan dhadhanka iyo dhadhanka.
Waxaan kugula talineynaa inaad ka akhrido jimicsiga, hantida faa'iidada leh iyo hababka diyaarinta.
Daqiiqadu waxay u baahan yihiin inay karkariyaan mar walba. Ka hor inta aan la karin, waa in lagu burburiyo mindi. Per kilo of boqoshaada waxay u baahan doontaa 6 litir oo biyo ah, halkii 100 g - ugu yaraan 2 litir. Biyaha karkariga ah waxaad u baahan tahay inaad ku shubto qanjaruufo soodhada. Ka dibna gali boqoshaada. Ka dib 15-20 daqiiqo, biyaha daadi, raaci boqoshaada si fiican. Waxaa lagugula talinayaa inay mar kale karsato.
Si loo sameeyo khadadka ammaanka, waxay u baahan yihiin in la qalajiyo bil gudaheed. Iyada oo uumi ah ee qoyaanka iyo inta badan ee sunta. Nasiib darro, mar walba ma fududa in la kala saaro dabeecadaha la cuni karo ee laga helo khadadka aan la dabooli karin, xitaa iyaga oo ogaanaya calaamadaha. Haddii aad xitaa shaki ku jirtid, mushahad wanaagsan ayaa hortaagan in aad sumowdo, si fiican uga takhalus si aad uga fogaato cawaaqib xun. Si kastaba ha noqotee, boqoshaada cayriin ee cuntada waa mamnuuc.